सीमसार क्षेत्र अतिक्रमण, पक्षी विस्थापित « News24 : Premium News Channel
६ फाल्गुन २०७२, बिहीबार
सीमसार क्षेत्र अतिक्रमण, पक्षी विस्थापित
उदयपुर, त्रियुगा नदी किनार आसापासको सीमसार क्षेत्र केही वर्ष यता अतिक्रमण हुँदै आएपछि यहाँ पाइने दुर्लभ चरा तथा पक्षी विस्थापित हुँदै जान थालेका छन् ।
गाईघाटको राजावास क्षेत्र हुँदै पूर्वी तपेश्वरीको भागलपुर क्षेत्रसम्मका त्रियुगा नदीको दुवै किनार क्षेत्रका सीमसार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ सारस, सेतो बकुल्ला, तथा पानी हास लगायत पक्षी विस्थापित भएका छन् । जमिन अतिक्रमण गरेर खेती गर्ने तथा नदी किनार क्षेत्रमा मनपरी ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा झिक्ने गरेपछि सीमसार क्षेत्र सुक्न थालेकोले दुर्लभ पक्षी विस्थापित हुन थालेका हुन् ।
जोगिदह– ७ का ८० वर्षीय भुटाई चौधरी भन्छन्, “पहिला–पहिला यहाँ धेरै भू–भाग सीमसार क्षेत्र थियो, सयौँको सङ्ख्यामा सेतो बकुल्ला र सारस आउँथे, अहिले चरा पक्षी देखिन छाडे ।” सीमसार क्षेत्रका भू–भाग मिचेर खेतीपाती गर्ने गरेको तथा केही भू–भागबाट मनपरी बालुवा झिक्ने गरेको कारण सुख्खा बगर बनेको छ ।
सीमसार क्षेत्र सुख्खा हुनथालेका कारण यहाँ माछाका भुरा तथा भ्यागुता पाइन छाडेका जनता उच्च्मावी जोगिदहका शिक्षक देवेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म सीमसार क्षेत्र हुँदा त्रियुगा नदी किनार क्षेत्रमा सप्तकोसी क्षेत्रबाट सयौँको सङ्ख्यामा चरा पक्षी आएर बस्ने गर्थे । छवर्ष अघिसम्म पनि हिउँदको समयमा साइबेरिया भएर सप्तकोसीसम्म आउने पक्षी, तथा बकुल्लासमेत त्रियुगाको सीमसार क्षेत्रमा आएर आहारा खाने तथा चर्ने गरेको कार्कीको भनाइ छ ।
पहिला÷पहिला पानी हास, सारस तथा सेतो बकुल्ला र हुटिट्याउँ जस्ता चरा पक्षीले भरिभराउ हुने यस क्षेत्रमा हिजोआज चरा पक्षी देख्न नपाएको स्थानीवासी रत्नप्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ । रासस÷
आठ महिने शिशुको घाँटी रेटेर हत्या गर्ने आमा–बुवा पक्राउ
रुपन्देही । आठ महिना शिशुको हत्या गर्ने आमा एक दम्पतीलाई पक्राउ गरेको छ । रुपन्देहीको
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार
संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या गर्ने आरोपित सार्वजनिक
संखुवासभा । संखुवासभामा सामूहिक हत्याका आरोपितलाई प्रहरीले आज (आइतबार) सार्वजनिक गरेको छ । एकै परिवारका
२७ भाद्र २०७८, आईतवार
संखुवासभा हत्याकाण्ड : प्रहरी अनुसन्धान प्रगति नजिक, घटनापछि गाउँ छाडेकाहरुको खोजी सुरु
काठमाडौ । संखुवासभाको मादी नगरपालिकामा एकै परिवारका ६ जनाको तीन पुस्ताकै वंश नास हुने गरि
२३ भाद्र २०७८, बुधबार
संखुवासभा घटना : भेटियो एकै परिवारका ६ शव, कोही ओछ्यानमा, कोही झाँडीमा
काठमाडौं । संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको शव फेला परेको छ । सोमबार घटनाबारे जानकारी पाएपछि
२१ भाद्र २०७८, सोमबार
कल्याणपुरमा भ्रष्टाचार : मेयर निलम्बित, उपमेयर उही पारामा, युवाहरू सडकमा (भिडियो)
लेस्टर र नेपोली बराबरीमा रोकियो
याे देश दलहरूको मात्र हो कि जनताको पनि ? कता जाँदैछ देश ? (भिडियो)
पृथ्वी राजमार्गमा विहानै ट्रक दुर्घटना, एकको मृत्यु
रोमाको सानदार जित